Biyo Buuxdhaafiyay Celceliska 4 / 5 ka mid ah 3
N / A, waxay leedahay 6.3K views
“Oh, waalan .. !! Taasi waa xiran tahay ama qaawan tahay !? Dabaasha dabaasha Alba si lama filaan ah ayuu ugu yimid codsi saaxiibbadeed. Byung-jin, oo garatay sida loo sameeyo indhaheeda oo ay la muuqato dharka jilicsan ee haweenka ee dabaasha, ayaa si qalad ah ugu dhacday shil weyn oo ay ka ilmeysay dabaasha jacaylkeedii ugu horeeyay, Da-hee. Biyo ayaa ku soo daadaneysa qolka guriga qolka la rogmaday darteed, guriga milkiilaha oo go'aansaday inuu joogo inta dayactirka lagu jiro, wuxuu la kulmayaa gabdho lagu dabaasho oo caan ah…
Cutubka 28 September 22, 2021
Cutubka 27 September 15, 2021
Cutubka 26 September 15, 2021
Cutubka 25 September 6, 2021
Cutubka 24 September 6, 2021
Cutubka 23 August 26, 2021
Cutubka 22 August 26, 2021
Cutubka 21 August 7, 2021